आफ्नो भाग्य चम्काउनु छ भने यी चीजहरु मध्ये एक चिज नछुटाई घरमा राख्नुहोस् ! – Khabar Silo
ज्योतिषशास्त्र अनुसार बिहीबारको दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले सुखद पारिवारिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान र धन प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । शास्त्रअनुसार बिहीबारका दिन केही कामहरु भने बर्जित गरिएको छ । बृहस्पति ग्रहको अनुकूलताको लागि केही यस्ता कार्यहरु हुन्छन् जुन बिहीबारको दिन गर्नु उचित मानिँदैन । बिहीबारको दिन के गर्दा सुभफल मिल्छ ? १. सूर्य उदाउनु […]
Posted on December 19, 2020 December 19, 2020 Author khabar silo
काठमाडौ । विश्वमा विभिन्न किसिमका सर्पहरु पाइन्छ । हामिलाई हाम्रो घर खेत परीपरी पाइने बिभिन्न सपहरु बारे मात्र थाँहा छ । यस्तै भारतमा पनि एक अनौठो दुई मुखे सर्प पाइन्छ । भारतको राजस्थानस्थित थार मरभुमीमा दुई मुखे सर्प धेरै नै पाइन्छ । यस सर्पलाई वैज्ञानिकहरुले रेड बोआ सर्प नाम दिएका छन् । तपाईलाई थाहाँ छ […]
आज महा शिवरात्री देख्ने बित्तिकै भगवान शिवजिको दर्शन गरि पुरा पढ्नुहोस मनले चिताएको कार्य पूरा हुनेछ
Posted on March 11, 2021 Author khabar silo
आज शिवरात्री होइन, महाशिवरात्री हो। शिवरात्री अर्थात “भगवान शिवको रात” त प्रत्येक चन्द्र महिनाको १३औं अथवा १४औं दिन (आधा चंद्रचरणको कालो रात)मा हुने गर्छ तर वैदिक फागुन महिनामा आजको दिन हुने शिवरात्रीलाई त महाशिवरात्री भनेर भनिंछ। भगवान भोले वावा शंकरको प्रिय रात हो। एकजना पापी शिकारीले महाशिवरात्रीको दिन अनायसै चाहना वेगैर शिवलिंगको रातभरी आराधना गरेकोले […]